करोडौं कमाउँछन् तर भाडाको घरमा बस्छन् यी अभिनेत्रीहरु - Experience Best News from Nepal
करोडौं कमाउँछन् तर भाडाको घरमा बस्छन् यी अभिनेत्रीहरु
बलिउड चर्चाको हिसाबले मात्र होइन । आम्दानीको हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ । अधिकांश अभिनेत्रीहरु बलिउडबाट करोडौको कमाई गर्दछन् । तर पनि भाडको घरमा रहँदै आएका छन् । भाडाको घरमा रमाउने बलिउडमा पाँच अभिनेत्रीहरु यस्ता छन््ः
रणवीर कपुर जस्तो सुपरहिट अभिनेताका साथ आफ्नो पहिलो चलचित्र बनाउने नरगिस फखरी बलिउडमा राम्रो कमाउने अभिनेत्री मध्येकी एक पनि हुन् । यी अभिनेत्रीले ‘रकस्टार र ‘हाउसफुल’ जस्ता हिट चलचित्रमा काम समेत गरेकी छिन् । तर पनि उनी अहिलेसम्म भाडाको घरमा बस्छिन् ।
राम्रो कमाउ अभिनेत्रीमा इलियानाको नाम पनि सबै अगाडी आउँने गर्दछ । उनले अभिनय करियरको सुरुवात अंधेरीस्थित एक भाडाको घरबाट गरेकी थिइन् । हिट अभिनेत्री भइसक्दा पनि उनी त्यही घरमा अझे भाडामा बस्दै आएकी छन् ।
निकै सुन्दर अभिनेत्री ज्याकलीनको पनि हालत त्यस्तै छ । उनी पनि भाडाको घरमा बस्छिन् भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन गाहे पर्न सक्छ । उनी जति नै कमाई भएपनि भाडाको घरमा बस्दै आएकी छन् । एक प्रोजेटबाट करोड थाप्ने ज्याकलीन बान्द्र स्थित एक घरमा भाडामा बस्दछिन् ।
सलमान खानकी एक्स गर्ल फ्रेण्ड कट्रीनाको बलिउडमा बैग्लै पहिचान छ । उनी पनि महिनामा करोडौ कमाउने अभिनेत्री हुन् । पछिल्लो केही बर्षदेखि उनी अर्का एक्स ब्वाइफ्रेण्ड रणवीर कपुरका साथ कार्टर रोड स्थित सिल्वर सेड अपार्टमेन्टमा भाडामा बस्दै आएकी छन् ।
केही चलचित्रमा दमदार भुमिका निभाएका कारणले सबैको दिलदिमागमा राज गर्न सफल अभिनेत्री ऋचा थुप्रै पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भएकी छन् । उनी मुम्बइको बर्सोवा इलाकाको एक घरमा करिब सात बर्षदेखि भाडामा बस्दै आएकी छन् । उनी अहिले आफ्ना लागि एक आलिसान घरको खोजि गर्दैछिन् ।
हिट फिल्म कबिर सिंह पश्चात ३ करोड पारिश्रमिक लिने साहिदको कति पुग्यो पारिश्रमिक ??
साहिदको कबिर सिङ्ग चल्दा, अर्जुन रेड्डीका विजयलाई किन फसाद ?
सोनाक्षीको घरमा पुग्यो प्रहरी टोली, ठगी धन्दाको मुद्दा
कन्ट्रोभर्सी क्विन कंगना पर्दामा हट र विन्दास !! के छ रोमान्स
सामाजिक संजालमा खुलेकी इशाको तस्बिरले ततायो बलिउड !! हेर्नुहोस ६ तस्बिरमा
प्रेग्नेन्ट समिरा रेड्डीले पानीमुनी पुगेर गरिन् फोटो शूट (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)